Ntuziaka - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
1. Nlezianya na ojiji maka LCD modul
Wdọ aka ná ntị maka ọkụ eletrik: A ga-emerịrị ihe ndị a ga - eme tupu imeghe ma ọ bụ dozie ma ọ bụ soldering na LCM:
Iji yikwasị eriri aka mgbochi.
Iji yikwasị uwe mgbochi.
Anti-static n'ala nwere ike etinyere, akpan akpan ke akọrọ na ala okpomọkụ [ala iru mmiri] gburugburu ebe obibi.
Iji jiri akpa nwere ihe mgbochi static.
1-2 Gbanyụọ ọkụ ọkụ tupu ịwụnye, wepụ ma ọ bụ gbanye LCM ahụ.
1-3 Iji zere nsogbu EMl, biko jikọọ LCM na ngwa yana EMC nchedo.
A ga-agbanwe ihe dị iche na ọnọdụ kwesịrị ekwesị na VR ma ọ bụrụ na LCM na-agba ọsọ na ọkwa dị elu nke okpomọkụ.
1-5 lt ka mma ịnweta igwe kpo oku n'ime LCM iji melite ọsọ ngosi na ala okpomọkụ.
1-6 Iji zere ịkọ LCD, biko ewepụla ihe nkiri nchedo tupu ịwụnye LCM.
1-7 Biko debe ebe ọrụ dị ọcha iji kpuchido LCM site na ihe ruru unyi.
1-8 Biko emeghela LCM ma ọ bụrụ na ọ daa, nke ahụ nwere ike imetụta nhazi nke nyocha.
1-9 nwere mmetuta na ultraviolet zere iji ma ọ bụ kpughere n'okpuru ìhè anyanwụ ọ gwụla ma ọ bara uru na ultraviolet.
1-10 Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụba PIN ma ọ bụ eriri USB dị larịị mgbe ị na-arụ ọrụ, biko lekọta ịgbado ọkụ mmetụta, dị ka obere-circuit ma ọ bụ ọjọọ ịgbado ọkụ.
2.Precaution iji maka OLED modul
2-1-1 Zere itinye oke egwu na modul ma ọ bụ mee mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe ọ bụla na ya.
2-1-2. Emela oghere ndị ọzọ na bọọdụ sekit ebipụtara, gbanwee ọdịdị ya ma ọ bụ gbanwee ya ihe ndozi nke modulu ngosi OLED.
2-1-3 Akwasasịla usoro ngosi ngosi OLED.
2-1-4 Adịghị arụ ọrụ ya karịa ogo kachasị dị elu.
2-1-5 Etinyela, gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ tụgharịa usoro ngosi ngosi OLED.
2-1-6 na-ere ọkụ: naanị na ọnụahịa IO.
2-1-7Otinye: biko nchekwa na akpa ọkụ eletrik na gburugburu ebe obibi dị ọcha.
2-1-8 Ọ bụ ihe a na-ahụkarị iji "Nchekwa Ihuenyo" iji gbatịkwuo ndụ ma Ejila ndozi na nguzobe ruo ogologo oge na ngwa ngwa.
2-1-9 Ejila ozi echekwara na panel OLED maka ogologo oge, nke ahụ ga-eme ka "ihuenyo gbaa" oge mmetụta.
2-1-10 Winstar nwere ikike ịgbanwe ngafe components, gụnyere R2and R3 ịgbanwe (Resistors, capacitors na ngwa ndị ọzọ na-agafe agafe ga-adị iche) ọdịdị na agba nke dị iche iche kpatara.)
2-1-11 Winstar nwere ikike ịgbanwe PCB Rev. (Iji mejupụta nnweta nkwụsi ike, njikarịcha njikwa na arụmọrụ kachasị mma na arụmọrụ ... wdg, n'okpuru mbido abụghị na-emetụta njirimara eletriki na akụkụ ndị ọzọ ， Winstar nwere ikike gbanwee ụdị.)
2-2 Ijikwa anya
2-2-1 Ebe ọ bụ na a na-eji iko mee ihe ngosi ngosi, etinyela mmetụta dị n'usoro dị otú ahụ na-agbada site n'ọkwá dị elu.
2-2-2 lỌ bụrụ na ngosipụta ngosipụta! agbajie site na mberede na ihe dị n'ime ya na-apụ apụ, kpachara anya ka ị ghara iku ume ma ọ bụ ịtọ ihe ọkụkụ.
2-2-3 A na - etinye nrụgide na ngosipụta ngosipụta ma ọ bụ agbata obi ya nke ngosi ngosi ngosi OLED, ihe owuwu nwere ike mebie ma kpachara anya ka ị ghara itinye nrụgide na ngalaba ndị a.
2-2-4.The polarizer na-ekpuchi elu nke ngosi ngosi ngosi OLED dị nro ma dịkwa mfe nchacha.Biko kpachara anya mgbe ị na-ejikwa modulu ngosi OLED.
2-2-5 Mgbe elu polarizer nke OLED ngosipụta modul nwere ala, hichaa elu ahụ. Ọ jiri uru nke iji teepu adhesion.
Scotch Mending Mezie No.810 ma ọ bụ ihe Ẹkot
Agbalịla iku ume n'elu ala mmetọ ma ọ bụ jiri akwa nwere ihe mgbaze hichaa elu ahụ
dị ka ethylalcohol, ebe ọ bụ na elu nke polarizer ahụ ga-abụ igwe ojii. Ọzọkwa, attentionaa ntị
ka mmiri na ihe na-esote nwere ike imebi polarizer ahụ:
2-2-6 Jide usoro ngosi OLED nke ọma mgbe ị na-etinye usoro ngosi OLED n'ime Housinglọ obibi. Etinyekwala nrụgide ma ọ bụ nrụgide gabigara na ngosipụta ngosipụta OLED Ihe nrụgide ndị a ga-emetụta ihe ngosi ahụ Ọzọkwa, chekwaa oke siri ike maka mpụga.
2-2-7 etinyela nrụgide na ibe LSI na akụkụ ndị akpụrọ gburugburu.
2-2-8Ekwesila ma ọ bụ gbanwee usoro ngosi OLED.
2-2-9 Etinyekwala akara ntinye mgbe ike mgbagha dị.
2-2-10 Lezienụ anya nke ọma na gburugburu ebe ị na-arụ ọrụ mgbe ị na-enyefe modulu OLEDdisplay iji gbochie omume nke mmewere ihe mberede site na ọkụ eletrik.
Jide n'aka na ị ga-eme ka ahụ mmadụ daa mgbe ị na-ejikwa modulu ngosi OLED.
Jide n'aka na ị nwere ike iji ngwaọrụ ma ọ bụ mgbakọ dị ka igwe eji ere.
Iji gbochie ọgbọ nke static eleetricity, zere imezu nzukọ ọrụ n'okpuru akọrọ gburugburu.
A na-etinye ihe nkiri nchebe na elu nke ngosipụta ngosipụta nke ngosi OLED Kpachara anya ebe ọ bụ na enwere ike ịmepụta ọkụ eletrik mgbe ị na-ewepụ ihe nkiri nchebe.
2-2-11 A na-etinye ihe nkiri nchebe na ihu nke ngosipụta ngosi ma wepu ya ihe nkiri nchebe tupu ịgbakọta ya.N'oge a, ọ bụrụ na usoro ngosi OLED dị echekwara ruo ogologo oge, ihe fọdụrụ na-agbakwunye ihe nkiri nchedo nwere ike ịnọgide n'elu ngosipụta ngosipụta mgbe ewepụrụ fim ahụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, wepụ ihe fọdụrụnụ ihe site na usoro webatara n'elu Nkebi nke 5.
2-2-12.Ọ bụrụ na etinyere ọkụ eletrik mgbe a na-agba ụgwọ usoro ngosi OLED ma ọ bụ mgbe ọ dị enịm n'okpuru elu iru mmiri gburugburu, ndị electrodes nwere ike corroded na-akpachara anya ka zere nke a.
3 Nchekwa Nchekwa
3-1 Mgbe ị na-echekwa modulu ngosi OLED, tinye ha na akpa mgbochi ọkụ eletrik na-ezere ekpughere ọkụ anyanwụ ma ọ bụ oriọna nke oriọna ndị na-enwu ọkụ. na, kwa, na-ezere elu ọnọdụ okpomọkụ na oke iru mmiri ma ọ bụ ọnọdụ dị ala (ihe na-erughị 0 Celsius C).
4. Nkọwa Pixel
Rịba ama: Ọ bụrụ na pixel ma ọ bụ akụkụ pixel pixel ma ọ bụ akụkụ pere mpe karịa 50% nke pixel emetụtara ma ọ bụ mpaghara pixel emetụta, ọ ga -atụle as1 ntụpọ.
Note2: Ekwesighi inwe odi iche puru iche nke putara site na 5% ND Nzacha n’ime 2 sec oge nyocha.
Note3: Mura na ntụpọ na-enwu enyo nyochara site na 5% nnyefe ND Myọcha dị ka ndị a.